कांग्रेस राजनीतिमा शशांक | रुपान्तरण
कांग्रेस राजनीतिमा शशांक
३० भाद्र २०७६, सोमबार १७:२२
‘बाउन्न घुस्सा त्रिपन्न ठक्कर’ खाएर पनि नचेतेको देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस पार्टी सिध्दान्त बिपरितको, सेलाइ सकेको बिबादलाई ब्यूँताउन खोजी रहेकोछ । यसका लागि संस्थापन पक्षले कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई बिबादमा तान्न खोजेकोछ । डा. कोइरालाले आगामी अधिबेशनमा आफूलाई सभापतिको प्रत्याशी घोषित गरेका छन । गएको अधिबेशनको समयमा नै डा. शशांक आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुतगर्ने बिचारमा थिए । तर, त्यतिबेला कांग्रेसका हितैषी, छरछिमेकमा रहेका कांग्रेसमाथि सदभावराख्ने ब्यक्तित्वहरु लगायत धेरैले डा. शशांकलाई रोकेर हालका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सभापतिकोे अवसर दिएका थिए । त्यतिबेला भएको सहमति अनुसार चौधौं अधिबेशनमा सभापतिका उम्मेदवार शशांकहुने निश्चित भएको थियो । तर, अहिले सभापति देउवा त्यो सहमतिबाट पछाडि हटेका छन ।
यो तथ्यपछि अहिलेको हिन्दू बिबादमा डा. कोइरालालाई घिसार्ने कुनै आधार छैन । त्रिवेणी तीर्थ र हिन्दू देवताहरुको प्रभावमा रहेका नवलपुर जिल्लाका जनता धार्मिक प्रवृत्तिका छन । उनीहरु मंसीरमा धान काटेपछि ‘धान्यान्चल यज्ञ’ को आयोजना गर्दछन । यस्ता धान्यान्चल यज्ञमा बिभिन्न ब्यक्तिहरुले बिभिन्न बिद्यालय, अस्पताल, मठ, मन्दिरका लागि खुला रुपमा स्वेच्छाले आफनो शक्ति अनुसार दानदिने गर्दछन । समाजमा सामुदायिक भावनाको बिस्तारगर्न धान्यान्चलको आयोजना महत्वपूर्ण रहेको छ ।
यस्ता धान्यान्चल कार्यक्रमहरुमा जनताले डा.शशांक कोइरालाको उपस्थितिको चाहना राखेका हुन्छन ।
यो जिल्लाबाट तीन पटक संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सरल र मृदु स्वभावका धनी डा. कोइराला धान्यान्चल आयोजनामा मतदाताको मांग अनुसार उपस्थितहुने गरेका छन । यस्ता उत्सवमा उनी जनताप्रति आफनो कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछन । जनतामा आशा जगाउँछन । उनीहरुको आवाजमा आफनो आवाज मिलाउँछन । यी उत्सव हिन्दू परम्परा अनुसार आयोजना हुन्छन । भजन कीर्तन र नाचगान त स्वाभाविक हिसावले हुने नै भयो । यस्ता आयोजनामा डा. कोइरालाले बोल्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको रुपान्तरणले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा उनी भन्दछन, ‘मलाई त्यत्रो स्नेह गरेर तीन तीन पटक चुनाव जिताउने मेरा मतदाताले मलाइ बेला बेलामा भावात्मक बनाउँछन । यस्तै भावनामय अवस्थामा मैले हिन्दू जनता र हिन्दूधर्मको हितको कुरा उठाएको छु । तर, मेरो राजनीतिक बिचारधारा भने धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो । नेपाली कांग्रेस सदैब मानिसको धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएकोछ । उ त्यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेपगर्न चाहँदैन । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सभापति तथा नेपाली लोकतन्त्रका प्रतीक पुरुष बीपी कोइरालाले धर्मको मामिलामा नेपाली कांग्रेसलाई पृथक राख्नु भएको थियो । धर्म निरपेक्षताको खास अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो । म मानिसको धार्मिक भावनाको कदर गर्दछु । त्यसैले पनि, मलाई राजनीतिगर्न र चुनाव लडन धर्मको सहारा लिनुपर्दैन ।’
डा. शशांकको स्पष्टिकरणले सबै कुरा खुलस्त पारेकोछ । तै पनि, कांग्रेसभित्र डा. शशांकलाई बिबादमा तान्न यस्ता कुरा कोट्याउने गरिन्छ । यो कसको स्वार्थमा छ त ? निश्चय पनि, यसलाई देशको एकमात्र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बिभाजित गर्ने बृहत्त योजनाको भाग भन्न सकिन्छ । पार्टीभित्र हिन्दू धर्मलाई ‘धार’ का रुपमा दांगका नेता स्वर्गीय खुमबहादुर खडकाले स्थापित गरेको बताइन्छ । धर्म निरपेक्षताको बिषयलाई स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस कार्य समितिको बैठकमा नराखी आपूm खुशी स्वीकृति दिएको आरोप स्व.खडकाले लगाउने गरेका थिए । कांग्रेसमा धर्मको धार टेकेर हिंडेका धेरै नेता हिन्दू धर्मको प्रेमले होइन, नेपाल र भारतका धनी मठाधीशहरुको अकूत सम्पत्तिबाट आकर्षित भएर लागेका हुन भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । सत्य यही हो कि राजनीतिको बैतरणीतर्न हिन्दू धर्मको सहारा पाइन्छ भने राम्रै भो नि ।
कांग्रेसमा संबैधानिक राजतन्त्रको पुनरोदयको आशा गरेर बस्नेहरुको संख्या ठूलो छैन । कांग्रेसका नेताहरु आफूलाई राजतन्त्रले सँधै दुःख दिएको कुरामा सचेत पनि छन । यो अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरु आफैंले आफना नेताहरुलाई आरोप लगाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन । कांग्रेसमा फैलिएको गुटवन्दीले यसलाई भटकिएको आत्माका रुपमा रुपान्तरित गरेकोछ । यसलाई यो तहसम्म ल्याउनेमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुकै अप्रभावकारी नेतृत्व जिम्मेवारछ ।
देशमा अहिले मूल्य र मान्यता ओझेलमा परेकोछ । जनताले यतिबेला बीपी कोइरालालाई सम्झिएका छन । जनताले गरीवको तस्वीर भित्तामा राखेर कामगर्ने बीपी जस्ता समाजवादी राजनेता तथा चिन्तकको खोजी गरेका छन । बीपीका बारेमा समाचारपत्रहरुमा लामा लामा रचनाहरु लेखिन थालेका छन । यसलाई गजबको जागरण मान्न सकिन्छ । बीपीले सोच्नु भएको सबै कामगर्न नसकेपनि जनताप्रति उहाँको जस्तो बिश्वास राखेर कामगर्ने नेता अहिलेको खोजी हो । आफना पिताश्रीको चिन्तन अनुरुपको समाज बनाउन डा. शशांक कोइराला कति प्रभावकारी हुनेछन ? शशांक अहिले जनताका अपेक्षा र राजनीतिका चुनौतिको संघारमा उभिएकाछन । उनी अपेक्षाकृत कम उमेरका छन । उनको स्वभाव शान्त छ । इमान्दार छवि छ । आँखाका बिशिष्ट चिकित्सकका रुपमा उनले नेपाली जनताबाट प्रसस्त लोकप्रियता कमाएका छन । कांग्रेसका लागि उनी स्वाभाविक नेता हुन सक्दछन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिका रुपमा शशांकले गर्नुपर्ने काम थोरै छन तर कठिन छन । बिगत एक दशक यताको नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको अवस्था खिइदै गएकोछ । नेताहरुको एकाधिकारवादी चाहनाका कारण पार्टीले गतिलिन सकेको छैन । कांग्रेसलाई सक्रियताको चौबाटोमा ल्याउन बीपीको नाममात्रै होइन, बीपीको उत्तराधिकारीको खोजी गरेको छ समयले । दक्षिण एशियाको राजनीतिमा उत्तराधिकारको राजनीति गलत मानिदैन । भारतमा जवाहरलाल नेहरुकी छोरी इन्दिरा र उनका छोरा राजीव सफल उत्तराधिकारी हुन । बीपीका उत्तराधिकारीका रुपमा शशांकले आपूmलाई कसरी प्रस्तुत गर्दछन ? त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।